ICasa Ippina: Ifulethi, iphuli yegadi, iibhayisekile, iKayak - I-Airbnb
ICasa Ippina: Ifulethi, iphuli yegadi, iibhayisekile, iKayak
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFilippo
Le ndlu ibekwe kumgangatho wokuqala we-villa. Kubantu abane. Indawo ezolileyo enomnyango ozimeleyo, iveranda, ichibi lokuqubha, igadi entle, , indawo yokupaka yabucala.WiFi, umabonakude weSatellite, iambrela yaselwandle, ibhegi epholileyo. Umgama ukusuka elunxwemeni km 1,3. Indawo yokumisa ibhasi iimitha ezingama-700. Iivenkile ezinkulu ezikufuphi, ikhemesti, iivenkile kunye neendawo zokutyela. Kuphela i-1 km kude ne-Albion lighthouse kunye nombono wakhe wolwandle omlingo. Ilungele iintsapho ezinabantwana, abahambi abangatshatanga okanye isibini kunye nosomashishini.
IApartmen inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinesitovu, imicrowave, itoaster, iketile, umenzi wekofu kunye nebarbecue (eyongezelelweyo). Igumbi lokuhlala kunye nekhitshi kunye nefenisha yesilingi, igumbi lokuhlambela elineshawa (90x90), umatshini wokuhlamba; Igumbi lokulala elikhulu elinebhedi ephindwe kabini, ikhabethe, idesika kunye ne-aircon, igumbi lokulala lesibini elinebhedi enkulu, i-wardrobe, idesika, i-ventilator. Sibonelela ngelinen, iitawuli. I-WiFi kunye nomabonakude wesathelayithi ojikeleze i-30 ch.
Sinikezela ngeenkonzo zokuhlamba impahla (ibhaskithi enye) Rs 400.
ICasa Ippina ikwindawo yokuhlala ezolileyo. Abamelwane balungile kwaye bazolile. IAlbion ayikho kwindawo yokhenketho ngokwenene, nokuba kukho iClub Med, yiyo loo nto inoxolo. Rhoqo kusasa elunxwemeni unokuba neentlanzi ezintsha ngokuthe ngqo kumlobi.
Siya kukuvuyela ukukucebisa ezona ndawo zibalaseleyo onokundwendwela kuzo kunye nohambo oluphambili. Ngesicelo, siququzelela, kunye neKayak yethu kunye ne-4x4 yethu, ukuhamba elwandle kunye nokutyelela isiqithi. Singanikezela ngothutho oluya kwisikhululo seenqwelomoya (2ways) ngexabiso le-Rs 3000. Ii-Bycicles zokurenta kwindawo
Siya kukuvuyela ukukucebisa ezona ndawo zibalaseleyo onokundwendwela kuzo kunye nohambo oluphambili. Ngesicelo, siququzelela, kunye neKayak yethu kunye ne-4x4 yethu, ukuhamba elwan…